Maitiro ekuisa Atom (uye kuiisa muchiSpanish) muDebian | Linux Vakapindwa muropa
Izvo zviri kuwedzera zvakajairika kugadzira kodhi mafaera uye zvinyorwa zvinoenderana zvakanyanya zvakajairika mabasa atinoita. Kune ichi chisikwa, podhi yekodhi inodikanwa iyo inotibvumidza isu kuti tigadzire mafaera uye nekuachengeta iwo mune akakodzera fomati. MuDebian 9 isu tine Vim neGedit maturusi, asi dzimwe nguva, ine simba kana yakazara kodhi mhariri inodiwa.
Pakati pevanozivikanwa uye vanozivikanwa kodhi edhita ndeye Atomu, mupepeti anoshuvira kuve IDE uye yatinogona kuisa nekushandisa muDebian pasina kuburitsa mari chero ipi zvayo.
Atom idhairekodhi kodhi iyo inogona kuve yakabatana neGitHub
Kuisa Atomu mune chero vhezheni yeDebian zviri nyore nekuti mu iyo yepamutemo Atom webhusaiti tinogona kuwana chirongwa muDeb fomati kana mu rpm fomati. Mune ino kesi isu tichasarudza iyo chirongwa mune dhi fomati. Kana tango dhawunirodha pasuru iyi, isu tinovhura chinongedzo mufaira mune pasuru yacho uye tinonyora zvinotevera:
sudo dpkg -i atom-amd64.deb
Izvi zvichaisa iyo Atom kodhi mupepeti pane yedu yekushandisa system. Asi Hatichazviwana muchiSpanish asi muChirungu. Dambudziko kune avo vasingazive mutauro weShakespeare kunyange uchigona kugadziriswa nekukurumidza. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuenda kuPakeji -> Zvirongwa Tarisa uye sarudza sarudzo "Isa Mapakeji / madingindira". Iwindo rinotevera richaonekwa:
Mune iyo Isa Mapakeji sarudzo isu totsvaga iyo package atomu-i18n uye isu tichaiisa. Mushure mekumisikidzwa, tinoenda kuZvirongwa mukati mehomwe uye nekushandura Chirungu kuenda kuSpanish (es), titangise mupepeti wekodhi uye tichava neAtom muSpanish. Via Isa Mapakeji isu hatigone chete kushandura mutauro weiyo kodhi mhariri asi isu zvakare tinokwanisa kuisa ekuwedzera-ons nemabasa matsva kana madingindira ekugadzirisa chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuisa Atom (uye kuiisa muchiSpanish) muDebian
Ndatenda. Ndakarega kuzviisa muchiSpanish nguva refu yapfuura nekuti zvaiita kunge zvisiri nyore, uye iwe waratidza kuti zvaive nyore.
iyo inondipa inotevera kukanganisa kana uchitsvaga iyo pasuru: isingakwanise kuwana yemuno mupi chitupa
Unoziva here kuti ungazvigadzirisa sei?
Pindura kuna Oriol
Ini ndatevera nzira dzinoverengeka dzekumisikidza dzinosanganisira dzako, uye ini handizive kuti nei, atomu harioneke riine bar yemenu etc. ingori mamiriro ezvinyorwa.
Chimwe chinhu, sevapepeti vakati wandei, iyo chete iyo inokutendera iwe kupurinda ndeye xed asi uine xed unogona kushanda mune imwechete hwindo.
- sublime kwete
Linux Mint 19 ichave ichiwanikwa kutanga kwaJune 2018